Antwerp, ဖလန်းဒါးစ်အတွက် ဦး တည်ရာ ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | နယ်သာလန်, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
Antwerp ၎င်းသည်အမည်တူပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်သည် ဖလန်းအတွက်။ ၎င်းသည်လှပသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဘရပ်ဆဲလ်မှကီလိုမီတာ ၄၀ အကွာတွင်တည်ရှိပြီးကြွယ်ဝသော၊ တက်ကြွသော၊ စီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအရအရေးပါသောဥရောပဆိပ်ကမ်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလား Antwerp ခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်?
ယခုအချိန်တွင်ဆက်စပ်မှုအတွက်အခြေအနေ Covidien-19 ထံမှ, ဥရောပ၏ကျန်အတွက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် နှေးနှေးနှင့်တဖြည်းဖြည်းဖွင့်လှစ်။ ပြတိုက်များ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများ၊ ရဲတိုက်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေးများဖွင့်လှစ်ထားသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းသို့သင်ခရီးလှည့်လည်နိုင်ပြီးဇူလိုင်လတွင်ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ အပန်းဖြေဥယျာဉ်များ၊ လောင်းကစားရုံများနှင့်ရေကူးကန်များဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်သည်။
2 Antwerp ခရီးသွားလုပ်ငန်း
မြို့က အဆိုပါ Scheldt မြစ်၏ဘဏ်များပေါ်မှာကျနော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲဘရပ်ဆဲလ်ကနေကီလိုမီတာ ၄၀ နဲ့နယ်သာလန်က ၁၅ ခုသာဖြစ်တယ်။ ဖလန်းဒါးစ်ဒေသသည်ဒတ်ခ်ျစကားပြောသောဖလင်ရှန်းစကားပြောဆိုသောဒေသဖြစ်သည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်၎င်းသည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိခဲ့သည် - အလယ်ခေတ်များတွင်၎င်းသည်ခရိုင်တစ်ခုသာဖြစ်လျှင်၊ နောက်ပိုင်းတွင်ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ နယ်သာလန်၊ လူဇင်ဘတ်၊
ယနေ့ဖလန်းဒါးစ်သည်နေရာသုံးနေရာ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်တစ်ခု၊ ပြင်သစ်တွင်တစ်ခုနှင့်နယ်သာလန်၌အခြားနေရာတစ်ခုရှိသည်။ မြို့တော် Antwerp နှင့်ပတ်သက် တစ် ဦး အတွက်၎င်း၏ဇစ်မြစ်ရှိပါတယ် vicus gallo-romanနောက်ပိုင်း ၁၀ ရာစုတွင်၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည် သန့်ရှင်းသောရောမအင်ပါယာနောက်ပိုင်း ၁၆ ရာစုတွင်၎င်း၏တောက်ပမှုသည်ကြီးထွားလာပြီးပုန်ကန်မှု၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုများကြားတွင် ၂၀ ရာစုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဂျာမနီကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မဟာမိတ်များကလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။
Antwerp တွင်သင်ကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်နိုင်သည် ပြတိုက်များ၊ ဆွဲဆောင်မှုများ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများ၊ ဗိသုကာဆိုင်ရာအံ့ဖွယ်အမှုများ၊။ အသင်းတော်များအကြောင်းပြောကြပါစို့။ မြို့တော်တွင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ တရားဇရပ်များနှင့်ဗလီများရှိကြသည်။
La ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တည်ဆောက်ရန်နှစ်ပေါင်း ၁၆၉ နှစ်ကြာခဲ့ပြီး ၁၅၂၁ ခုနှစ်တွင်ခေါင်းလောင်းသည် ၁၂၃ မီတာမြင့်သည့်မြို့၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ် Gothic ပုံစံ နှင့်အကြား, အနုပညာများစွာကိုအကျင့်ကိုကျင့်ပါရှိသည် Rubens အလုပ်လုပ်သည် ဒီနေ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးနောက်အဓိက nave တွင်တွေ့နိုင်သည်။ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီမှနေ့လည် ၃ နာရီအထိဖွင့်သည်။
အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် San Carlos Borromeo ၏ဘုရားကျောင်း, Rubens တံဆိပ်ခေါင်းတွေအများကြီးမြင်သည်အဘယ်မှာရှိ။ ၎င်းသည်ဂျပန်သို့အပ်နှံသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်ပြီးတည်ဆောက်ခဲ့သည် entre 1615 y က 1621။ Santa María၏အဓိကယဇ်ပလ္လင်နှင့် Santa María၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်လှပပြီးအလွန်ရှုပ်ထွေးသောသစ်သားပန်းပုများနှင့်ပန်းချီကားများကိုပြောင်းလဲရန်အတွက်အသုံးပြုသောအဓိကယဇ်ပလ္လင်အထက်ရှိစပ်စုပြီးမူရင်းယန္တရားများစွာရှိသည်။ နံနက် ၁၀ နာရီမှညနေ ၁၂ နာရီအထိညနေ ၂ နာရီ ၅ နာရီအထိဖွင့်သည်။
La San Andrésဘုရားကျောင်း ၎င်းသည် ၁၆ ရာစုမှအခြားလှပသောဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ပြီးအမည်တူ၏ရပ်ကွက်အတွင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းတွင် Baroque ယဇ်ပလ္လင်များနှင့်ဘုရင်၏ဘုရင်မ Mary Stuart ၏အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုရှိသည်။ အဆိုပါဘုရားကျောင်းနှောင်းပိုင်း Gothic အဘိဓါန်စတိုင်၌ရှိ၏နှင့် 70 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ယဇ်ပလ္လင်သည်မြင့်မားလှပြီးအဆင်းလှသည်။ သင်သည်အသင်းတော်များကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားလျှင် Antwerp ဘုရားကျောင်း၊ စိန့်ပေါလ်၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်စိန့်ဂျိမ်းဘုရားကျောင်းရှိသည်။
ရှုခင်းများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင်နည်းနည်းအစဉ်အလာရှိသလား။ အဲဒီမှာရှိတယ် Antwerp အတွက်ထောင့် သင်ကချစ်ကြလိမ့်မည်။ ဥပမာ - Underpass or Santa Ana ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း။ ၎င်းသည် ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်သောကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည် မြစ်ကိုဖြတ်ကူး နှင့်သစ်သားစက်လှေကားများကဝင်ရောက်သည်။ အတွက်နောက်ထပ်ပါသောထောင့် Vlaeykensgang လမ်းကြား 1591 ကနေချိန်းတွေ့။
ဤလမ်းကြားသည် Hoogstraat နှင့် Oude Koormarkt Pelgrimstraat ကိုဆက်သွယ်ပေးပြီးသင်ဖြတ်ကျော်သောအခါ၎င်းသည်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းလမ်းလျှောက်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အရင်ကဒီလမ်းကြားကိုဖိနပ်ချုပ်သူတွေနဲ့အလွန်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေနေထိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ ရှေးဟောင်းအိမ်များနှင့်ပန်းချီပြခန်းများရှိသည် နှင့်အချို့သောသီးသန့်စားသောက်ဆိုင်။
အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် Grote markt မူလက၎င်းသည်အလယ်ခေတ်လူနေရပ်ကွက်ပြင်ပတွင်တည်ရှိသောစတုရန်းသို့မဟုတ်ဖိုရမ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပြပွဲနှင့်နှစ်စဉ်စျေးကွက်ကိုအင်္ဂလိပ်ကုန်သည်များသည်အီတလီ၊ စပိန်သို့မဟုတ်ဥရောပမြောက်ပိုင်းမှကုန်သည်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်သောနေရာတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း။ ယနေ့ခေတ်ခေတ်သစ်ဗားရှင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် antwerp ၏ဆိပ်ကမ်း။ ၎င်းသည်ကြီးမားပြီး၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုကိုတန်ဖိုးထားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် စက်ဘီးစီး။ ငှားပါသို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးပါ ဆိပ်ကမ်းareaရိယာရှာဖွေစူးစမ်း။
သငျသညျနွေရာသီ၌သွားလျှင်, နာရီအနည်းငယ်အနားယူခြင်းနှင့်ဖြုန်းဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဦး တည်ရာဖြစ်နိုင်သည် စိန့်အန်နီကီကမ်းခြေ, မြစ်၏ဘယ်ဘက်ကမ်းပေါ်မှာ။ ခြေလျင်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စက်ဘီးဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘတ်စ်ကားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ, ဒေသခံ mussels ကိုစားကြလော့ဤနေရာတွင်ပြင်ပရေကူးကန်တွင်အလွန်နာမည်ကြီးနေသည်။
ဒီထူးခြားတဲ့ထောင့်တွေအပြင် Antwerp ကမြို့ကငါတို့ကိုကမ်းလှမ်းတယ် ပြတိုက် သင်လျစ်လျူရှုဖို့မလိုချင်ကြလိမ့်မည်။ ဒါ အဆိုပါ Rubens အိမ်, Antwerp အတွက်အနုပညာတော်ဝင်ပြတိုက်, စာပေ၏အိမ်သည် ရိဒ်ပြတိုက်, အ Eugeen Van Mieghem ပြတိုက်, အ FOMU ပြတိုက် ဒါမှမဟုတ် Plantin-Moretus ပြတိုက်။
သင်တို့သည်လည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ပြတိုက်အသား၏ခန်းမမြို့၏အသံ ခြောက်ရာစုနှစ်များစွာသံသယသမိုင်းနှင့်အတူ အပျို၏အိမ် အရာမူလက XNUMX ရာစုအတွက်, မိန်းကလေးများများအတွက်မိဘမဲ့ဂေဟာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Antwerp ၏ပြတိုက်များ၏မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Antwerp ပြတိုက်အက်ပ်ကို download လုပ်ပါ, Play စတိုးသို့မဟုတ် AppStore တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
မြို့ကသင့်အားကမ်းလှမ်းသောနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာဝယ်ရန်ဖြစ်သည် Antwerp City Card။ ဗားရှင်းသုံးမျိုး၊ ၂၄၊ ၄၈ နှင့် ၇၂ နာရီရှိသည်။ ပြတိုက်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုတံခါးများ (ထိပ်ဆုံးပြတိုက် ၁၅ ခု၊ သမိုင်းဝင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၄ ခုနှင့်ဆွဲဆောင်မှု ၂ ခု) ဖွင့်ခြင်းအပြင် ၁၀ နှင့် ၂၅% ကြားလျှော့စျေးဖြင့်သင်အခမဲ့ခရီးသွားနိုင်သည် မြို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏စနစ်။
နောက်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းအရေးပါသော: အင်တာနက် WIFI! Antwerp သည် visitors ည့်သည်များကိုအခမဲ့အင်တာနက်ကိုပေးသည်။ အခမဲ့ WiFi ဇုန်များစွာရှိသည်။ Via Sinjoor၊ Scheldt၊ Central Grote Markt၊ Meirbrug, Schoenmarkt သို့ ဦး တည်သောဗဟိုဘူတာအကြားလမ်း။ သင်ရုံမှတ်ပုံတင်ရန်ရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင်၏လည်ပတ်မှုကိုစီစဉ်ပါ အကယ်၍ သင့်တွင်ရက်အနည်းငယ်ရှိပါက - သမိုင်း ၀ င်စင်တာ၊ ဗဟိုဘူတာရုံTheaterရိယာ၊ ပြဇာတ်ရုံခရိုင်၊ ဆန်အန်ဒရက်ခရိုင်၊ တက္ကသိုလ်ခရိုင်၊ အနီရောင်ခရိုင်အကြားရွေးချယ်ပါ။ များသောအားဖြင့်ဤမြို့သည်များသောအားဖြင့်ဆန္ဒစတင်သည့်စာရင်းတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခြားသူများအနေဖြင့်စုန်းမ၊ အမ်စတာဒမ်ကဲ့သို့အနိုင်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » နိုင်ငံများ » နယ်သာလန် » Antwerp, ဖလန်းဒါးစ်အတွက် ဦး တည်ရာ